Ministry of Education ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန |
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၇
သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု မူဝါဒ (မူကြမ်း) အပြီးသတ် အကြံဉာဏ်ရယူခြင်း အစည်းအဝေးပွဲကို ယနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီတွင် Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပသည်။
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီသို့ အလှူငွေပေးအပ်
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၆
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီသို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အလှူငွေပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် (၄)တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖင်လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Ms Riikka Laatu နှင့်ဆွေးနွေး
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Ms Riikka Laatuနှင့် လက်ရှိဖင်လန်-မြန်မာ ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကိုဗစ်အလွန်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို Virtual စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၃
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ပညာရေးအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ တွင် Zoom Webinar စနစ်ဖြင့်ကျင်းပရာ ရှေးဦးစွာ ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms Audrey Azoulay ၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr António Guterres ၊ နော်ဝေနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Ms Erna Solberg ၊ ဂါနာနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr Nana Akufo-Addo ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Ms Baroness Sugg တို့က အဖွင့်မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားကြပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့ပညာရေး အစည်းအဝေးကြေညာစာတမ်းကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ဆရာများအသင်းအဖွဲ့၏ သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံပိုင် အနိမ့်ပျံ အသေးစားဂြိုဟ်တု MMSATS-1 အား တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ ဂျပန်အာကာသအေဂျင်စီ (Japan Aerospace Exploration Agency – JAXA) သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၁
ဂျပန်နိုင်ငံ ဟော့ကိုင်းဒိုးတက္ကသိုလ် (Hokkaido University) နှင့် တိုဟိုကိုတက္ကသိုလ် (Tohoko University) တို့မှ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံပိုင် အနိမ့်ပျံ အသေးစားဂြိုဟ်တု MMSATS-1 (မြန်မာအမည် “လောကနတ်-၁”) ဂြိုဟ်တု ကို အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်သဖြင့် အာကာသအတွင်း လွှတ်တင်နိုင်ရန် ဟော့ကိုင်းဒိုးတက္ကသိုလ်မှ ဂျပန်အာကာသအေဂျင်စီသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁း၃၀ နာရီ၊ ဂျပန်စံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး Online မှ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
Tuesday, October 27, 2020 - 17:46
Tuesday, October 27, 2020 - 00:22
Monday, October 26, 2020 - 17:55
Friday, October 23, 2020 - 00:00
Wednesday, October 21, 2020 - 16:03
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ (၇၃) နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် (၁၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၁၃) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေး ကျင်းပ
Tuesday, October 20, 2020 - 18:25
မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် သင်ကြားရေးရာထူးများ တိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ် PGDMA အမှတ်စဉ် (၂၀) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း
Thursday, October 1, 2020 - 00:42
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် PGDMA အမှတ်စဉ် (၂၀) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း
Thursday, October 1, 2020 - 00:40
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား ဆန်းစစ်မှုအခြေအနေ (၂၀-၇-၂၀၂၀)
စာသင်ကျောင်းများတွင် COVID-19 ရောဂါသံသယလက္ခဏာရှိသူ/နေမကောင်းဖြစ်ပွားနေသူ တွေ့ရှိပါက ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ (Version-1)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ကသာပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ကျိုင်းတုံပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ကျောက်ဖြူပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (စစ်ကိုင်းပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (တောင်ငူပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ထားဝယ်ပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ပခုက္ကူပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ပြည်ပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ပုသိမ်ပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ဘားအံပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ဘိုကလေးပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မကွေးပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မြစ်ကြီးနားပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မြောင်းမြပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မိတ္ထီလာပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မုံရွာပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (မော်လမြိုင်ပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (လွိုင်ကော်ပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (လားရှိုးပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (သင်္ကန်းကျွန်းပညာရေးကောလိပ်)
PPTT အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)ဝင်ခွင့်အောင်စာရင်း (ဟားခါးပညာရေးကောလိပ်)
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မြန်မာစာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲသင်္ချာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ရူပဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ သမိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (၂၀၂၀)
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
မြန်မာစာဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
သင်္ချာဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ဓာတုဗေဒဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ရူပဗေဒဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ဇီဝဗေဒဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ပထဝီဝင်ဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ဘောဂဗဒဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
သမိုင်းဘာသာရပ် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ အချက်အလက်များအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်းစာတမ်း
တင်ပြသူ-ဒေါက်တာနေဝင်းဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်)
HE Forum 2019
Read more about တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ အချက်အလက်များအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်းစာတမ်း
ဒေသနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော ဘွဲ့သင်တန်း၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းများ သင်ကြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး
တင်ပြသူ- ဒေါက်တာစီစီလှဘူး၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်
Read more about ဒေသနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော ဘွဲ့သင်တန်း၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းများ သင်ကြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး
တက္ကသိုလ်များရှိ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာနများ၏ တာဝန်များ
တင်ပြသူ-ဒေါက်တာသူရဦး၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ မုံရွာတက္ကသိုလ်
Read more about တက္ကသိုလ်များရှိ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာနများ၏ တာဝန်များ
Presenter-Theingi (Technological University Thanlyin)
Read more about UNIVERSITY INDUSTRY LINKAGES
The Role of Private Higher Education in Myanmar: Opportunities, Challenges, and Hopes
Presenter-Private Higher Education Institutions Association(PHEIA)
Read more about The Role of Private Higher Education in Myanmar: Opportunities, Challenges, and Hopes
တင်ပြသူ- ဒေါက်တာကျော်ကျော်ခေါင်၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကိုယ်ပိုင်(သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအဖွဲ့
Read more about ကိုယ်ပိုင်(သို့မဟုတ်)ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
၂၀၁၉ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ)သို့ တင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့သည့် စာတမ်းများ
NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT (NIHED) PROJECT
TOWARDS UNIVERSITY AUTONOMY IN MYANMAR: POLICIES, PLANNING AND IMPLEMENTATION
Presenter_CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ သုတေသနညီလာခံ(၂၀၁၉) ကျင်းပပြီးစီးမှုနှင့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များဆိုင်ရာ စာတမ်း
တင်ပြသူ- ဒေါက်တာထင်ဇော်စိုး၊ ပါမောက္ခချုပ်(ငြိမ်း)၊ အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်(မကွေး)
မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ၏ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စာတမ်း
တင်ပြသူ- ဒေါက်တာစိုးဝင်း၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
ဒေါက်တာအောင်ကျော်၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဌာန၊ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် e-Payment စနစ်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး
တင်ပြသူ-ဒေါက်တာသိန်းဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
ဆရာအတတ်သင်ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၃)
ဆရာအတတ်သင်ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၂)
ဆရာအတတ်သင်ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
ရေတွင်မြှုပ်နိုင်ပေါ်နိုင်သောအရာများ (၁) မြှုပ်ခြင်း၊ပေါ်ခြင်း (Grade-3)
သူငယ်တန်းကလေးများ အကူးအပြောင်းကာလ ချောမွေ့စေရေး အစီအစဉ်များ (သူငယ်တန်း)
Introduction to Grade-1 (Grade-1)
Total Visitors 1503004